၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံဆုကို ဘယ်အသင်း ကိုင်မြှောက်နိုင်မှာလဲ
ကမ္ဘာ့ဖလားမှာ ဘယ်အသင်းဗိုလ်စွဲမလဲ၊ အင်္ဂလန်အသင်း ဘယ်အဆင့်ထိရောက်နိုင်မလဲ
14 Jun 2018 . 4:02 PM
၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲက အခု ကြာသပတေးည (၉း၃၀)နာရီမှာ စတင်ပါတော့မယ်။ ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲမှာ ဗိုလ်စွဲဖို့ရေပန်းစားနေတဲ့အသင်းစာရင်းတွေလည်း ထွက်ပေါ်နေပြီဖြစ်ပြီး နာမည်ကြီး ဘရာဇီးလ်အသင်းက (၆)ကြိမ်မြောက် ချန်ပီယံဆုကို ဆွတ်ခူးနိုင်ဖို့ ထိပ်ဆုံးက ရေပန်းစားနေပါတယ်။ ဗြိတိန်နာမည်ကျော် အားကစားသတင်းစာ Daily Mail က ကလောင်ရှင်တွေဖြစ်တဲ့ ဘောလုံးလောကရဲ့ နာမည်ကျော်လူပုဂ္ဂိုလ်တွေက ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲမှာ ဗိုလ်စွဲမယ့်အသင်းနဲ့ အင်္ဂလန်အသင်း ဘယ်အဆင့်အထိရောက်နိုင်မလဲဆိုတာ အခုလိုပဲ ခန့်မှန်းဖော်ပြခဲ့ကြတယ် . . . . .
ဂျေမီရက်နက်ပ် Jamie Redknapp (လီဗာပူးလ်နဲ့ အင်္ဂလန်ကစားသမားဟောင်း)
(ချန်ပီယံ – ဘရာဇီးလ်) – ဘရာဇီးလ်အသင်းမှာ Hard Working Players တွေဖြစ်ကြတဲ့ ဖေမီနို Firmino လို ကစားသမားမျိုး၊ နေမာ Neymar လို့ Genius Player တွေရှိပါတယ်။ တကယ်လို့ နေမာသာ ကြံ့ခိုင်မှုပြည့်ဝနေမယ်ဆိုရင် ဘရာဇီးလ်အသင်း ကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံဆုရရှိသွားမှာပါ။
(အင်္ဂလန်-ကွာတားဖိုင်နယ်) – အင်္ဂလန်ကစားသမားတွေကိုတော့ ကျွန်တော် ဖိအားမပေးလိုပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ လက်ရှိကစားသမားစုဖွဲ့မှုက ပြီးခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာ့ဖလားနှစ်ကြိမ်ထက် သာပါတယ်။
ပီတာခရော့ခ်ျ Peter Crouch (အင်္ဂလန်တိုက်စစ်မှူးဟောင်း)
(ချန်ပီယံ-ဘရာဇီးလ်) -ဘရာဇီးလ်အသင်းမှာ ဂိုး၊ ရှေ့လယ်နောက် ကစားသမားတွေက ထိပ်တန်းအဆင့်မှာရှိပါတယ်။ နေမာနဲ့ တခြားတိုက်စစ်မှူးတွေ အတွဲအဖက်မိမိကစားနိုင်ရင် ဘရာဇီးလ်အသင်းက ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးဖြစ်လာမှာပါ။
(အင်္ဂလန်-ကွာတားဖိုင်နယ်) – အင်္ဂလန်အသင်းအနေနဲ့ ကွာတားဖိုင်နယ်အဆင့် တက်နိုင်မယ်လို့ ကျွန်တော် မျှော်လင့်ပြီး ဖြစ်နိုင်ရင် ဆီမီးဖိုင်နယ်အထိ ရောက်ရှိစေချင်ပါတယ်။
ခရစ္စဆပ်တန် Chris Sutton (ချယ်လ်ဆီးနဲ့ အင်္ဂလန်တိုက်စစ်မှူးဟောင်း)
(ချန်ပီယံ-ပြင်သစ်) – ပြင်သစ်အသင်းဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲတွေမှာ အောင်မြင်မှု၊ ကျရှုံးမှုတွေ အများကြီး ကြုံတွေ့ခဲ့ပြီးပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ ဒီနှစ်မှာတော့ ပြင်သစ်အသင်းဟာ အောင်မြင်မှုရဖို့အတွက် လုံလောက်တဲ့အခြေအနေမှာရှိပြီးသားပါ။ ဘာပေ Mbappe က ပြင်သစ်အသင်းရဲ့ ကြယ်ပွင့်ဖြစ်လာမှာပါ။
(အင်္ဂလန်-ကွာတားဖိုင်နယ်) – ဟာရီကိန်း Harry Kane သာ ခြေစမ်ွးပြနိုင်ရင် အင်္ဂလန်အသင်း ဆီမီးဖိုင်နယ်အဆင့်အထိတောင် ရောက်နိုင်ပါတယ်။
မာတင်ကီယွန် Martin Keown (အာဆင်နယ်ဂန္ထ၀င်နောက်ခံလူ)
(ချန်ပီယံ-ဘရာဇီးလ်) – လွန်ခဲ့တဲ့(၄)နှစ်က ပြိုင်ပွဲမှာ ဘရာဇီးလ်အသင်းဟာ ကိုယ့်ပရိသတ်တွေရဲ့ ဖိအားပေးမှုကို ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့ ဘာဖိအားမှ မရှိတော့သလို အသင်းကလည်း အရင်ကထက် ပိုကောင်းလာပါပြီ။
(အင်္ဂလန်-ကွာတားဖိုင်နယ်) – အင်္ဂလန်အသင်းအနေနဲ့ ကွာတားဖိုင်နယ်အဆင့်အထိတော့ ရောက်သင့်ပြီး ဘရာဇီးလ် ဒါမှမဟုတ် ဂျာမနီနဲ့ ရင်ဆိုင်ရဖို့များပါတယ်။၂၀၁၄ ကမ္ဘာ့ဖလားတုန်းက ကျွန်တော်တို့အသင်း အုပ်စုက ထွက်ခဲ့ရလို့ ဒီတစ်ကြိမ်မှာ ကွာတားဖိုင်နယ်က ထွက်ခဲ့ရမယ်ဆိုရင် တိုးတက်လာတယ်လို့ ဆိုရမယ်။
ဘရိုင်ယန်ရော့ဘ်ဆင် Bryan Robson (မန်ယူနဲ့ အင်္ဂလန်ဂန္ထ၀င်)
(ချန်ပီယံ- ဂျာမနီ) – ကမ္ဘာ့ဖလားကို (၂)ကြိမ်ဆက်ရဖို့ဆိုတာ ခက်ခဲပေမယ့် ကျွန်တော်ကတော့ ဂျာမနီကိုပဲ ကြိုက်ပါတယ်။ ဆာနေး Sane လို ကစားသမားမျိုးကို ချန်လှပ်ရလောက်တဲ့အထိ ဂျာမနီအသင်းမှာ ကစားသမားကောင်းတွေ များပြားနေပါတယ်။
(အင်္ဂလန်-ကွာတားဖိုင်နယ်) – အင်္ဂလန်အသင်း ကွာတားဖိုင်နယ်အဆင့်ကို ကျော်ဖြတ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော် မထင်ပါဘူး။
ဒါကတော့ ကလောင်ရှင်တွေဖြစ်တဲ့ ဘောလုံးလောကရဲ့ နာမည်ကျော်လူပုဂ္ဂိုလ်တွေက ၂ဝ၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံဆုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ခန့်မှန်းချက်တွေ ပေးသွားတာပါ။ ၂ဝ၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားမှာ ဘယ်အသင်းဗိုလ်စွဲမယ်ထင်လဲ။
Photo: Goal.com,Getty Images,Stadium Astro
ကမ်ဘာ့ဖလားမှာ ဘယျအသငျးဗိုလျစှဲမလဲ၊ အင်ျဂလနျအသငျး ဘယျအဆငျ့ထိရောကျနိုငျမလဲ
၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲက အခု ကွာသပတေးည (၉း၃၀)နာရီမှာ စတငျပါတော့မယျ။ ၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲမှာ ဗိုလျစှဲဖို့ရပေနျးစားနတေဲ့အသငျးစာရငျးတှလေညျး ထှကျပျေါနပွေီဖွဈပွီး နာမညျကွီး ဘရာဇီးလျအသငျးက (၆)ကွိမျမွောကျ ခနျြပီယံဆုကို ဆှတျခူးနိုငျဖို့ ထိပျဆုံးက ရပေနျးစားနပေါတယျ။ ဗွိတိနျနာမညျကြျော အားကစားသတငျးစာ Daily Mail က ကလောငျရှငျတှဖွေဈတဲ့ ဘောလုံးလောကရဲ့ နာမညျကြျောလူပုဂ်ဂိုလျတှကေ ၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲမှာ ဗိုလျစှဲမယျ့အသငျးနဲ့ အင်ျဂလနျအသငျး ဘယျအဆငျ့အထိရောကျနိုငျမလဲဆိုတာ အခုလိုပဲ ခနျ့မှနျးဖျောပွခဲ့ကွတယျ . . . . .
ဂမြေီရကျနကျပျ Jamie Redknapp (လီဗာပူးလျနဲ့ အင်ျဂလနျကစားသမားဟောငျး)
(ခနျြပီယံ – ဘရာဇီးလျ) – ဘရာဇီးလျအသငျးမှာ Hard Working Players တှဖွေဈကွတဲ့ ဖမေီနို Firmino လို ကစားသမားမြိုး၊ နမော Neymar လို့ Genius Player တှရှေိပါတယျ။ တကယျလို့ နမောသာ ကွံ့ခိုငျမှုပွညျ့ဝနမေယျဆိုရငျ ဘရာဇီးလျအသငျး ကမ်ဘာ့ဖလားခနျြပီယံဆုရရှိသှားမှာပါ။
(အင်ျဂလနျ-ကှာတားဖိုငျနယျ) – အင်ျဂလနျကစားသမားတှကေိုတော့ ကြှနျတျော ဖိအားမပေးလိုပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ လကျရှိကစားသမားစုဖှဲ့မှုက ပွီးခဲ့တဲ့ ကမ်ဘာ့ဖလားနှဈကွိမျထကျ သာပါတယျ။
ပီတာခရော့ချြ Peter Crouch (အင်ျဂလနျတိုကျစဈမှူးဟောငျး)
(ခနျြပီယံ-ဘရာဇီးလျ) -ဘရာဇီးလျအသငျးမှာ ဂိုး၊ ရှလေ့ယျနောကျ ကစားသမားတှကေ ထိပျတနျးအဆငျ့မှာရှိပါတယျ။ နမောနဲ့ တခွားတိုကျစဈမှူးတှေ အတှဲအဖကျမိမိကစားနိုငျရငျ ဘရာဇီးလျအသငျးက ကွောကျစရာအကောငျးဆုံးဖွဈလာမှာပါ။
(အင်ျဂလနျ-ကှာတားဖိုငျနယျ) – အင်ျဂလနျအသငျးအနနေဲ့ ကှာတားဖိုငျနယျအဆငျ့ တကျနိုငျမယျလို့ ကြှနျတျော မြှျောလငျ့ပွီး ဖွဈနိုငျရငျ ဆီမီးဖိုငျနယျအထိ ရောကျရှိစခေငျြပါတယျ။
ခရစ်စဆပျတနျ Chris Sutton (ခယျြလျဆီးနဲ့ အင်ျဂလနျတိုကျစဈမှူးဟောငျး)
(ခနျြပီယံ-ပွငျသဈ) – ပွငျသဈအသငျးဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲတှမှော အောငျမွငျမှု၊ ကရြှုံးမှုတှေ အမြားကွီး ကွုံတှခေဲ့ပွီးပါပွီ။ ဒါပမေဲ့ ဒီနှဈမှာတော့ ပွငျသဈအသငျးဟာ အောငျမွငျမှုရဖို့အတှကျ လုံလောကျတဲ့အခွအေနမှောရှိပွီးသားပါ။ ဘာပေ Mbappe က ပွငျသဈအသငျးရဲ့ ကွယျပှငျ့ဖွဈလာမှာပါ။
(အင်ျဂလနျ-ကှာတားဖိုငျနယျ) – ဟာရီကိနျး Harry Kane သာ ခွစေမျှးပွနိုငျရငျ အင်ျဂလနျအသငျး ဆီမီးဖိုငျနယျအဆငျ့အထိတောငျ ရောကျနိုငျပါတယျ။
မာတငျကီယှနျ Martin Keown (အာဆငျနယျဂန်ထဝငျနောကျခံလူ)
(ခနျြပီယံ-ဘရာဇီးလျ) – လှနျခဲ့တဲ့(၄)နှဈက ပွိုငျပှဲမှာ ဘရာဇီးလျအသငျးဟာ ကိုယျ့ပရိသတျတှရေဲ့ ဖိအားပေးမှုကို ထိနျးခြုပျနိုငျစှမျးမရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒီတဈကွိမျမှာတော့ ဘာဖိအားမှ မရှိတော့သလို အသငျးကလညျး အရငျကထကျ ပိုကောငျးလာပါပွီ။
(အင်ျဂလနျ-ကှာတားဖိုငျနယျ) – အင်ျဂလနျအသငျးအနနေဲ့ ကှာတားဖိုငျနယျအဆငျ့အထိတော့ ရောကျသငျ့ပွီး ဘရာဇီးလျ ဒါမှမဟုတျ ဂြာမနီနဲ့ ရငျဆိုငျရဖို့မြားပါတယျ။၂၀၁၄ ကမ်ဘာ့ဖလားတုနျးက ကြှနျတျောတို့အသငျး အုပျစုက ထှကျခဲ့ရလို့ ဒီတဈကွိမျမှာ ကှာတားဖိုငျနယျက ထှကျခဲ့ရမယျဆိုရငျ တိုးတကျလာတယျလို့ ဆိုရမယျ။
ဘရိုငျယနျရော့ဘျဆငျ Bryan Robson (မနျယူနဲ့ အင်ျဂလနျဂန်ထဝငျ)
(ခနျြပီယံ- ဂြာမနီ) – ကမ်ဘာ့ဖလားကို (၂)ကွိမျဆကျရဖို့ဆိုတာ ခကျခဲပမေယျ့ ကြှနျတျောကတော့ ဂြာမနီကိုပဲ ကွိုကျပါတယျ။ ဆာနေး Sane လို ကစားသမားမြိုးကို ခနျြလှပျရလောကျတဲ့အထိ ဂြာမနီအသငျးမှာ ကစားသမားကောငျးတှေ မြားပွားနပေါတယျ။
(အင်ျဂလနျ-ကှာတားဖိုငျနယျ) – အင်ျဂလနျအသငျး ကှာတားဖိုငျနယျအဆငျ့ကို ကြျောဖွတျနိုငျလိမျ့မယျလို့ ကြှနျတျော မထငျပါဘူး။
ဒါကတော့ ကလောငျရှငျတှဖွေဈတဲ့ ဘောလုံးလောကရဲ့ နာမညျကြျောလူပုဂ်ဂိုလျတှကေ ၂ဝ၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားခနျြပီယံဆုနဲ့ ပတျသကျပွီး ခနျ့မှနျးခကျြတှေ ပေးသှားတာပါ။ ၂ဝ၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားမှာ ဘယျအသငျးဗိုလျစှဲမယျထငျလဲ။